Ukukhaba ngokuKhupha ngokuKhuthaza abaNtu - Izinto Zobugcisa
Ukukhaba ngokuKhupha ngokuKhuthaza abaNtu
Foster the People yiLos Angeles indie rock band eyaqala njengeprojekti yodwa yeemvumi, isigingci kunye nembethi yekhibhodi uMark Foster, owayesebenza njengomqambi wejingle kwezentengiso. Njengokuba iingoma zakhe zazisiba nkulu, uFoster wacela uCassbie Fink owayengumdlali weBass kunye nomculi weqonga uMark Pontius. Eli liqela lokuqala lomntu ongatshatanga, eliqale kwitshathi eshushu eyi-100 kaMeyi 7, 2011.
UMark Foster uchaze intsingiselo yengoma ku Ispinner UK : '' Ukumpompa ukukhahlela 'malunga nomntwana oshiye ingqondo yakhe kwaye uceba ukuziphindezela. Ukhutshiwe. Ndivakalelwa kukuba ulutsha kwinkcubeko yethu luya lusiba yedwa. Luhlobo lobhubhane. Endaweni yokubhala malunga namaxhoba kunye nentlekele ethile, bendifuna ukungena engqondweni yombulali, njengoko wenzayo uTruman Capote KwiCold Blood . Ndiyakuthanda ukubhala ngabalinganiswa. Leyo yindlela yam. Ndiyathanda ukungena ngaphakathi kweentloko zabanye abantu kwaye ndizame ukuhamba ngezihlangu zabo. '
UFoster uthi uthathele ingqalelo ukubhala le ngoma ngokwembono yexhoba, kodwa waziva ukuba iyakuba lipolisa. Ukwabonisa ukuba akukho bundlobongela kule ngoma, njengoko izoyikiso zingumbono wangaphakathi womntwana.
Malunga nezo 'Pumped Up Kicks' abanye abantwana kule ngoma banxibe: Ekupheleni kweminyaka yama-80s kunye nasekuqaleni kweminyaka yama-90, isihlangu seReebok Pump basketball sasikuthanda ukuthandwa ngokuthozama. I-sneaker yayinempompo emile okwebhasikithi kulwimi, kwaye umbono yayikukuba ukuba ufuna ukuphakanyiswa okungaphezulu, unokuyinika nje iimpompo ezimbalwa- khumbula ukuba uNike wayenaye uMichael Jordan ethengisa ukukhaba kwakhe, ke uReebok waye Unqwenela kakhulu. Owona mzuzu mkhulu kwimbali yeeMpompo weza xa uDee Brown weBoston Celtics ephumelela ukhuphiswano lweSlam Dunk ngo-1991 enxibe izihlangu. Ngaphambi nje kokuba i-dunk yakhe iphumelele, wafikelela ezantsi wonyusa iimpompo zakhe, umzuzu uRebebok wawusebenzisa kwintengiso yezihlangu.
Izihlangu zazibiza kakhulu, kwaye abantwana abanolo hlobo lwemali yokuyichitha kwi-basketball sneakers abangakhange bakhethe i-Air Jordans babethanda ukuba ngabona bantu banelungelo lokucaphukisa isihogo kuye nabani na onxibe i-Converse okanye i-Keds. Kule ngoma, abantwana abaneempuphu, okanye ubuncinci olu hlobo lwabantwana, basongelwa ngobundlobongela obukhulu.
Foster uxoxe ngokubhena ngokubanzi kwengoma kudliwanondlebe naye Ibhilibhodi Iphephancwadi elithi: '' Pumped Up Kicks 'yenye yeengoma ezidibanisa into eqheleke ngokwenene kwinto yanamhlanje, utshilo. Yingoma apho ungangqengqa khona esofeni uyimamele okanye ungaphakama udanise ujikeleze igumbi. '
Ukuthetha ngokubhala le ngoma kwi Amatye agiqekayo , UFoster wathi: 'Ndizama ukungena ngaphakathi kwentloko yomntwana ozimeleyo, onengqondo. Yif f - k uyicula imvubu, ngandlela thile - kodwa yingoma yehipsters eza kufuna ukudanisa kuyo. '
'Umpu' kule ngoma ngowokoqobo, kodwa awuzange uqale ngale ndlela. UMark Foster wabhala i-chorus yengoma kuqala, wayijonga njengengoma malunga nokuzithemba, kunye 'nompu' sisikweko. Oko kutshintshile xa eza nevesi yokuqala, awayeyisebenzisa ngokukhululekileyo ngexesha lokurekhoda. Le ndinyana yayicacile malunga nomntwana ofumana umpu katata wakhe, kwaye yatshintsha ukubonakala kwengoma, inika 'umpu' intsingiselo yokoqobo.
Ingoma iyakwazi ukufihla umyalezo omnyama phantsi kwengoma yayo emnandi. 'Ndihlala ndenza njalo ngeengoma ezininzi,' utshilo uMark Foster kwiTV yeMTV. Ndiyathanda ukubalisa uhlobo olwahlukileyo lwebali, ngokwengoma, kunaleyo iboniswa ngumculo, kuba izisa olunye uluhlu ebalini ngokwalo. Ndayibhala ibhloko kude nolwandle, kwaye bendisebenza kwindlu yomculo- iMophonics, indawo apho ndazenzela khona intengiso kunye nezinto- kwaye ndicinga ukuba oko kube nefuthe kwisandi. '
AbakwaMTVU bayicekisa le ngoma xa bedlala ividiyo, bewisa isandi nanini na xa uFoster ecula 'umpu' okanye 'iimbumbulu.' Waxela umphathi Amatye agiqekayo Ndicinga ukuba i-MTV yoyika elinye ibhendi enesandi ngolu hlobo. Ndicinga ukuba isandi siyakhohlisa. Unemiboniso yokwenyani emalunga nolutsha olukhulelweyo kwaye uneJersey Shore, apho intombazana ibethelwa khona ebusweni kwaye ibonisa ikliphu kaninzi-ninzi njengomntu oza kubukela umboniso. Kufana, oh, Kulungile, ubundlobongela basekhaya bulungile kodwa, ngathi, ukuthetha ngento enje ngamaxabiso osapho kunye nokuzahlula ulutsha kunye nokuxhaphaza akunjalo.
Impumelelo yengoma iyinxalenye yesibheno sayo seefomathi ezininzi, kwaye yayiyeyona ngoma yokuqala yokuphakamisa zombini iiBillboard's Alternative Songs kunye neDance Airplay charts. (Le yokugqibela iqhuba kuphela ukusukela nge-17 ka-Okthobha ka-2003).
I-chorus ibonisa amaxesha asibhozo kule ngoma, kubandakanywa amaxesha amane ekupheleni kwengoma. Ukuphindaphinda kweChorus luphawu lokubhalwa kwengoma, kodwa oku kuncinci, kwaye uMark Foster uyazi. 'Ukuba bendisazi ukuba ingoma izakudlalwa kuyo yonke indawo, ngendikhuphe ezo ngoma zingahambelaniyo nengoma kwaye ndiyihambise ngokukhawuleza, utshilo. I-NME . 'Ekupheleni kwayo, yichorus, chorus, chorus, chorus ... iyandiphambanisa le nto ukuyiva le chorus.'
Ingoma ayizange ikhutshwe ngokusemthethweni. Foster abantu bassist uCubbie Fink ucacisile Izinto.co.nz ` Yayiphoswa ijikeleze kwi-intanethi, kwaye abantu babebhloga malunga nayo kwaye iphelela kwi [umculo blog aggregator] Hype Machine, nonomathotholo nje ngokwendalo wayichola. Izikhululo zikanomathotholo zokuqala ezizimeleyo zaqala ukuyidlala, emva koko zaqala ukuyidlala, kwaye yayikhula kancinci kancinci. '
Khuthaza i-albhamu yokuqala yaBantu Iitotshi yakhutshwa ngoMeyi 23, 2011 ngeColumbia Record kunye nesiqalo. Utshilo uMark Foster I-CMU : 'Eli cwecwe lalilicathartic kum. Uninzi lweengoma zimalunga nokuzahlula nokuba ngabaphantsi. Kwakumnandi ukubakhupha kwaye uthathe ubunini bezinto endifuna ukubaleka kuzo. '
Le yayiyeyona ngoma isasazwayo kwinkonzo yomculo yase-US phakathi kokuqaliswa kwayo ngoJulayi 14, 2011 nasekupheleni konyaka. Olunye uhlobo lokondla abantu, u-'Helena Beat, 'yayiyeyona ngoma yesihlanu isasazwayo ngeli xesha linye.
Ingoma ibisuswe kumoya emva kokudutyulwa kwabantwana abangama-20 kunye nabasebenzi abathandathu kwiSandy Hook Elementary School eNewtown, eConnecticut, ngoDisemba ka-2012. Ubhale le ngoma malunga nokukhula kokugula kwengqondo kulutsha kwibhidi yokwenza incoko malunga nesidingo sotshintsho. Uthe kwingxelo kwi-CNN.com, Ndabhala 'Pumped Up Kicks' xa ndiqala ukufunda malunga nokukhula kwesifo sengqondo. Ndifuna ukuqonda isayikholoji engemva kwayo kuba yayiqhelekanga kum. Kwakoyikisa indlela ukugula kwengqondo phakathi kolutsha okwenyuka ngayo kule minyaka ilishumi idlulileyo. Ndandisoyika ukubona apho ipateni ibhekisa khona ukuba asiqali ukutshintsha indlela ebesizisa ngayo isizukulwana esilandelayo ... Le ngoma ibibhalwe njengendlela yokwenza ingxoxo eqhubayo yomcimbi obuthethwa ngawo, kodwa xa kufikwa kungenelelo lukarhulumente, yayihoywa kakhulu ...
'Ngoku, esi sihloko ekugqibeleni siphambili kwingxoxo enkulu kwaye ngethemba siza kukhokelela kutshintsho olukhulu kumgaqo-nkqubo oluya kuthintela ezi zenzo zobundlobongela ukuba zenzeke kwixesha elizayo. Oko kuthethiweyo, ndiyasihlonipha isigqibo sabantu sokucinezela ikhefu. Kwaye ukuba loo nto iba sisiseko sencoko enkulu enokuthi ikhokelele kutshintsho oluqinisekileyo lokuqhubela phambili, ke ndiyayixhasa ngokupheleleyo.
Ukujonga emva kule ngoma ngo-2014, uMark Foster uxelele I-NME ukuba wayezidla ngokubaluleka kwenkcubeko. Kunyanzelekile uluntu ukuba lube nencoko, utshilo. Ayisiyiyo nje imipu nemigaqo yemipu, kodwa nangobugcisa uqobo-apho ukhoyo umgca, kwaye yintoni ekufuneka ihlelwe. Ndiva ukuba ekutyhaleni imvulophu ngokwenkcubeko kunye nokunyanzela abantu ukuba benze ezo ncoko, yayiyinto enempilo kwilizwe eli. '
Lyrics for Xa Uthandana Nomfazi Omhle nguGqirha Hook kunye neMedicine Show
Iingoma zikaRudolph I-Red-Nosed Reindeer nguGene Autry
Iingoma zePiece nguPiece nguKelly Clarkson
Iingoma zeGucci Gang nguLil Pump
Iingoma zoMvundla omhlophe nguJefferson Airplane
Sgt. Ibhendi yePepper's Lonely Hearts Club yiBeatles
Iingoma zeClassico nguTenacious D
Iingoma zeBoom Clap nguCharli XCX
Iingoma zoMoya oyiNgcwele nguFrancesca Battistelli
Iintsingiselo ezingama-66- Ngaba uyalibona inani leengelosi?
Ixesha kuphela ngu-Enya
xa uphinda uthandana nelizwi elihle lomfazi
yinto engalindelekanga kodwa ekugqibeleni ilungile
sonke isiqalo esitsha sivela kwezinye iingoma zokuphela kwesiqalo
ndiyakuthanda climax blues band lyrics
kuhle kakhulu ukuba uthi u-bruno mars lyrics